Tatoazy kely ho an'ny tanana | Ny fanaovana tatoazy
Tatoazy kely, tsara tarehy ary malina
Vao tsy ela akory izay dia efa namoaka lahatsoratra momba ny tatoazy kely ho an'ny tanana izahay. Raha misy zavatra tsara momba ireo karazana tatoazy ireo, dia ankoatry ny malina dia kanto be izy ireo. Na ny ara-nofo aza dia sahy milaza aho.
Araka ny nolazaiko tamin'io fotoana io, ny tanana dia iray amin'ireo toerana ankafizin'ny vehivavy hahazoana ny tatoazy voalohany. Betsaka ny azo atao, na dia mitana andraikitra lehibe aza ny fironana indraindray. Manaraka izany dia hanome anao hevitra vitsivitsy momba an'ity tatoazy ity izahay sy ny fomba hanararaotana azy.
1 Hevitra sy hevitry ny tatoazy eo amin'ny tanana
1.1 Tatoazy amin'ny fo
1.2 Tatoazy Rose
1.4 Tatoazy kintana
1.6 Tatoazy vatofantsika kely
1.8 Tattoo Semicolon kely
2 Ahoana no hanararaotana azy ireo
3 Maharary ve ny tatoazy eo am-pelatanana?
4 Inona ny vidin'ny tatoazy kely toy izany?
5 Sarin'ny Tattoo Wrist
Hevitra sy hevitry ny tatoazy eo amin'ny tanana
Andian-teny, tandindona kely toy ny kintana na biby toy ny vorona na ny aloky ny elefanta tsara tarehy dia sasany amin'ireo tatoazy mahazatra izay ho hitantsika eo am-pelatanan'ny olona maro. Ankehitriny, araka ny nolazaiko, tsy stereotype io, na dia hampirisika antsika hieritreritra izany aza ny lamaody. Raha mieritreritra izany isika dia afaka manao karazana maro tatoazy tanana. Ny zava-drehetra dia resaka tsiro sy izay ao an-tsaintsika.
Amin'ity safidy kely amin'ny tatoazy kely ity ho an'ny hato-tanana dia afaka mahita karazana tatoazy isan-karazany isika toy ny hazo, vorona, litera na tandindona. Na ahoana na ahoana, amin'ny mainty foana ary tsy be loatra ny tombokavatsa. Kapoka tsotra sy tsara ary malama ireo.
Tatoazy amin'ny fo
Ny tatoazy am-po dia malaza ary mazàna dia maneho fotoana feno fifaliana, fitiavana na fitiavana amin'ny fiainantsika. Araka ny lokony dia midika zavatra iray na hafa izany. Ohatra, ny fo mainty dia maneho fa ny olona iray dia mandeha amin'ny dingana fisaonana ary ny loko mavo ho fanombohana vaovao. Noho io fahaizan'ny fahaizan-javatra io, dia mety hanaovana an'io faritra amin'ny vatana io izy ireo.
Ny raozy toy izany dia efa maneho zavatra tsara maro toy ny hatsaram-panahy, fankasitrahana, fangorahana ary hatsaran-tarehin'ny olona iray. NA ary ny dikany dia mety tsy mitovy arakaraka ny lokon'ity voninkazo ity. Ohatra, ny mavokely dia midika hoe tsy fananan-tsiny, ny mainty dia tandindon'ny fahaverezana, ary ny mena dia tandindon'ny fientanam-po. Etsy ankilany, raha tena tianao ny raozy dia afaka manao tombokavatsa amin'ny felam-boninkazo ka hatramin'ny fehezam-boninkazo iray manontolo ianao, raha tsotra amin'ny tsipika izany dia tena tsara.
Ny tatoazy lakroa dia matetika mifandray amin'ny Kristianisma ary amin'ny ampahany kely toy izany dia mandeha irery matetika izy ireo na atambatra amin'ny sarin'ny sampana oliva, voromailala ... Ankoatr'izay, misy lakroa maro hafa izay tsy misy ifandraisany firy amin'ny Kristianisma toy ny lakroa Celtic izay maneho ny fanantenana na ny ankh (karazana lakroa ejipsianina) izay maneho ny fiainana.
Ny tatoazy kintana dia misy heviny maro. Manana ny kintana eny amin'ny lanitra isika izay nanjary mpitari-dalana ho an'ny mpitsangatsangana maro ary anisan'ny tena dikan'ny hoe ny mpitari-dalana, izany hoe Ity kintana izay nataonao tatoazy ity no manamarika ny Mazava ho azy. Ao amin'ny tafika dia misy dian-kapoka marobe izay soloin'ny kintana, koa mety ho mariky ny voninahitra izany.
Ny tatoazy kely misy eo an-tànana kely dia tattoo de daty. Mety daty manandanja ho anao io. Ny nahaterahanao, ny nahaterahan'ny zanakao, ny andro fampakaranao, ny fahafatesan'ny havana akaiky na namanao ...
Tatoazy vatofantsika kely
Ny tatoazy vatofantsika dia tatoazy tantsambo, na dia ankehitriny aza ny tatoazy dia nanjary hita kokoa sy kanto kokoa dia nahazo dikany vaovao. Toy ny, ohatra, ny tanjaka na fikirizana, noho ny antony miharihary; manaja havana na namana maty na koa maneho solontena lehibe amin'ny ranomasina.
Ny marika tsy manam-petra dia iray amin'ireo tatoazy malaza indrindra eto an-tany. Misy heviny maro, toy ny tatoazy rehetra, ny iray amin'izany dia ny olombelona manana hery tsy manam-petra hahatratrarana izay kasainy hatao. Ny iray hafa dia manondro ny finoana ny vatana vaovao indray, afaka manondro fa misy zavatra tsy manam-pahataperana, na manao ahoana na manao ahoana ny fiafarany dia hanomboka indray ny zava-drehetra, izay azo ampifandraisina amin'ny tsingerin'ny vanim-potoana koa.
Tattoo Semicolon kely
Matetika ny semicolon dia manondro fa ianao (na efa nijaly) depression, fiankinan-doha, nalaim-panahy hamono tena na voan'ny karazana aretina ara-tsaina. Mety koa ilay olona manao tatoazy dia manana olona ao amin'ny fianakaviana na namana iray izay nandalo ny iray tamin'ireto aretina ireto ary te haneho firaisankina amin'izy ireo. Izy io dia endrika tsara indrindra hanondroana dingana fanatsarana sy fampahatsiahivana ny tanjakao anatiny.
Ahoana no hanararaotana azy ireo
ara-dalàna ny tombokavatsa eo amin'ny hato-tànana dia miavaka amin'ny faran'izay kely indrindra, satria tsy manome be ny toerana. Tsy midika izany fa tsy vita ny tena fahagagana, saingy tsy maintsy entina ao an-tsaina fa arakaraky ny kapoka ataon'ny tatoazy no manakaiky azy ireo sy matevina kokoa izy ireo dia mihazona ny loza mety hitranga isika rehefa mandeha ny fotoana. manjavozavo ny ranomainty. Amin'izany tranga izany dia tolo-kevitra ny fahatsorana mihoatra ny zava-drehetra.
Ankoatra izany, ireo karazana tatoazy ireo dia matetika misy ranomainty mainty noho ny antony mitovy. Tsy midika akory izany fa tsy azo ampiasaina ny loko, na dia antsipiriany fotsiny aza izany. Amin'ity tranga ity, mety kokoa ny miresaka izany amin'ny mpanaingo anao mba hahitana izay azo atao.
Maharary ve ny tatoazy eo am-pelatanana?
Tsy ny faritra maharary indrindra amin'ny vatana izay ahafahantsika manao tatoazy, fa haharary kokoa noho ny amin'ireo faritra toy ny soroka na soroka. Toy ny mahazatra, ny fanaintainana dia miankina betsaka amin'ny tsirairay, satria ny olona tsirairay dia samy manana ny tokonam-baravarany.
Inona ny vidin'ny tatoazy kely toy izany?
Raha ny mahazatra, ny vidiny ambany indrindra dia mety manodidina ny 60 euro, na dia miankina amin'ny studio tsirairay, ny mpanaingo tatoazy ary ny tatoazy izay tadiavin'ny olona iray aza. Mety ho lafo izany Na dia tsy maintsy raisina aza fa misy vidiny ho an'ny mpanao tatoazy amin'ny ranomainty sy fanjaitra, ny fotoana ampiasana vola hanaovana azy io sy fanomanana ny endrika. Zavakanto kanto no resahintsika ary noho izany dia tsy tokony hiambina isika, efa fantatrareo ny fomba fitenenana hoe: lafo ny lafo vidy.
Araka ny hitanao dia manana safidy maro ianao mba hahazoana tatoazy amin'ny tananao.Mila mahita ny anao fotsiny ianao ary milentika aloha raha te hanao ny ambiny ny artista manao tombokavatsa atokisanao. Inona ny volavola tianao indrindra? Tianao ve izany amin'ny loko na mainty sy fotsy? Manana tatoazy eo amin'ny tananao ve ianao?
Sarin'ny Tattoo Wrist
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Tattoos on » Tatoazy amin'ny sandry » Tatoazy kely, tsara tarehy ary malina
Tatoazy karandoha ho an'ny vehivavy, mampiseho ny lafiny ratsy indrindra aminy
Piercings amin'ny valahana sy clavicle